आजको मौषम कस्तो रहला ? - Dhangadhi Khabar
बुधबार ११, जेठ २०७९ ०५:४९
आजको मौषम कस्तो रहला ?
मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशको पुर्वी भूभागमा पूर्वीय वायु तथा मध्य र पश्चिमी भूभागमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव रहेको छ ।
अहिले देशभर आंशिक देखि सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिनभरको मौसम यसप्रकार रहनेछ ।
आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श :-
शुक्रबार २८, जेठ २०७८ ०८:०९ मा प्रकाशित